Waxbarashadu waa Key | Abaalmarinta Abaalmarinta - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Waxbarashadu waa furaha
Fahamka barashada ayaa fure u ah fahamka sida iyo sababta keentay ficil-galinta internetka ay dhibaato u noqon karto caafimaadka dhimirka iyo jirka. Qaybtan qaybta "The Reward Foundation" waxay eegaysaa wax ka barashada xaglo kala duwan.
Research waxay muujinaysaa in isticmaalka "pornography" joogtada ahi uu yahay 'niyad ahaan' la xiriirta dadka dhallinyarada ah ee leh heer aad u sarreeya dib u dhigista dhimista. Tan macnaheedu waa dadka isticmaala filimada sawiradu ma awoodaan inay dib u dhigaan qanacsanaanta degdegga ah ee abaalmarin aad u qiimo badan goor dambe, sida guusha imtixaanka. Kulliyadaha iyo jaamacaduhu waxay ka warbixinayaan heerarka ka-tagista sare ee guud ahaan Boqortooyada Ingiriiska iyo meelo kale.
Maxay yihiin dhinacyada kale ee hoos u dhaca? Cilmi-nafsiga Roy Baumeister buugiisa Doono ayaa leh inta badan dhibaatooyinka waaweyn, shaqsi ahaan iyo bulsho ahaanba, waxay udub dhexaad u tahay fashilaadda is-xakamaynta. Wixii ka soo baxay mid ka mid ah waraaqaha ugu caansan ee suugaanta sayniska bulshada, Baumeister wuxuu ogaaday in awooddu dhab ahaantii u shaqeyso sida murqaha: waxaa lagu xoojin karaa waxqabadka iyadoo lagu daali karo xad-dhaaf. Awoodda waxaa shidaal ku leh gulukoos, waana lagu sii xoojin karaa iyadoo la buuxiyo shidaalka maskaxda ku keydsan. Taasi waa sababta cunista iyo jiifka - iyo gaar ahaan ku guuldareysiga midkoodna - ay saameyn xun ugu leeyihiin is-xakamaynta (iyo sababta ay dadka cunnooyinka cuna u haystaan ​​waqti adag oo ay isaga caabiyaan jirrabaadda).
Jaamacadda Stanford University professor Philip Zimbardo wuxuu sharxayaa 'qabatimaadda arooska' iyo hoos u dhigidda guulaha waxbarasho ee wadahadalkan, Diidmada Guys?
Qaybtani waxay bixisaa khayraadka mawduucyada soo socda:
• Xusuusin iyo Barashada
• Qaboojinta galmada
• Muuqaalka Porno & Hore ee Galmada
• Aqoon la'aan
• Maandooriyaha Internetka